Number of results: 63905
ပင်စင်စားအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများကို နေပြည်တော်တွင် ချထားမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့သည်။ ရှေ့ပြေးတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ခြင်းအား မတ်လတွင် အပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။၅ထပ်တိုက်အဆောက်အဦးနှစ်လုံးကို ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်တွင် ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပြီး တစ်လုံးစီတွင် အခန်း...
ရန်ကုန်တွင် ဘတ်စ်ကားစနစ်သစ် စတင်
news The Irrawaddy, 16 Jan 2017 (4 years ago )
ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုစနစ်သစ်(YBS)အား မြို့တော်တွင် နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလှသည့် ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၆၉ လိုင်းရှိသော ရန်ကုန်ယာဉ် ထိန်းသိမ်းမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ မထသအမည်ရှိ ယခင်ဘတ်စ်ကားဟောင်းစနစ်နေရာတွင် အစားထိုးလိုက်ပြီဖြစ်သည်၊ လူထုဝန်ဆောင်မှုစနစ်သစ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များကို ခရီးသွားများအတွက် မ...
NLD မှ စွမ်းဆောင်ရည်လေ့လာစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း
news The Irrawaddy, 19 Jan 2017 (4 years ago )
အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်များကို လေ့လာစိစစ်မည့် အဖွဲ့တခုကို အာဏာရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်း လိုက်ပြီး ယင်းအဖွဲ့က လူတဦးချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို စိစစ် အကဲဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်...
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၅ မြို့နယ်မှ သြဂုတ်လတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ် ရရှိမည်
news The Global New Light of Myanmar, 19 Jan 2017 (4 years ago )
ကရင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ၅ ခုရှိ ကျေးရွာ ၁၄၃ရွာမှ အိမ်ခြေ ၁၁၄၄၂လုံးခန့်အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်မှ သြဂုတ်လအထိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ကို ကရင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ စတင်ပေးဝေမည်ဖြစ်သည်။ “ ဆိုပါလျှပ်စစ်စနစ် ၃ မျိုးရှိပါတယ်- ၃၀ ဝပ်၊ ၄၅ ဝပ် နဲ့ ၆၀ ဝပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၀ဝပ်အတွ...
သစ်တော ထုတ်ကုန် ကုန်သွယ်ရေးအတွက် နိုင်ငံ၏တောင်ပိုင်း ပြည်နယ် မှ EU နှင့် အတူ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးမည်
news Xinhau News, 22 Jan 2017 (4 years ago )
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရသည် သစ်တောထုတ်ကုန်များတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)နှင့်အတူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေး ထိုးမည်ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာ့သတင်းအေဂျင်စီမှ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အစီရင်ခံခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်အစိုးရမှ အုပ်ချုပ်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် သစ်တောဥပဒေ...
news Burma News International, 25 Jan 2017 (4 years ago )
ယမန်နေ့၌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် များနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်အချို့သောကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST)နှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု ပ...
ကေအဲန်ယူနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှုရရှိ
news The Irrawaddy, 26 Jan 2017 (4 years ago )
ကေအဲန်ယူနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် နယ်မြေအငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ၎င်းတို့မှ ဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိကြရန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သ​ဘောတူညီမှုအရ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)သ...
Filippo Grandi says Niger setsastrong example through its hospitality for people fleeing conflict in Mali and Nigeria. By: Louise Donovan | 13 December 2016 DIFFA, Niger – Despite facing high levels of poverty and other development challenges of its own, Niger is playingakey role in sh...
Filippo Grandi déclare que le Niger donne un excellent exemple en offrant l’hospitalité aux personnes qui fuient les conflits au Mali et au Nigéria. Par: Louise Donovan | 13 décembre 2016 DIFFA, Niger – Alors que le pays est lui-même confronté à une grande pauvreté et aux défis de son propre ...
news UNHCR, 20 Jun 2016 (4 years ago )
Elleafui la violence au Mali Tinalbarka, âgée de 16 ans: « Je m’appelle Tinalbarka. J’ai 16 ans. Je suis malienne. Ma familleafui Bamako à cause de la guerre. Nous sommes arrivés ici, à Mbera, où je vis avec mes parents. Heureusement, j’ai eu la possibilité de faire des études parce qu’il y a...